Muunad Baga - Shanghai Duxia Warshadaha iyo Ganacsiga
Bacda is rogaya ee funaanad
Bacda roodhida ee loo yaqaan 'Vest Rolling Bag', oo sidoo kale loo yaqaan 'bag roll-t-shirt', waa bac loo isticmaalo in lagu hayo cuntada cusub sida cuntada karsan, miraha, baastada bariiska, iwm.
Lakabka Double Mashiinka Rolling Bag Samaynta
Bac fidsan oo fidsan
Bacda rogrogaysa, waa bac loo isticmaalo in lagu hayo cuntada cusub sida cuntada karsan, miraha, baastada baastada, iwm. Badanaa waxaa lagu isticmaalaa baakadaha waaweyn.
Mashiinka Bacda Rolling Bag Flat Double Double
Xawaaraha Sare Flat Rolling Mashiinka Mashiinka
Mashiinka Bacda Rolling Bag Gawaarida Gawaarida otomaatiga ah
Bacda dharka (Xiisadda kuleylka iyo goynta kuleylka)
Bacda funaanadu waa mid ka mid ah bacaha caagga ah ee caadiga ah. Waxaa loogu magac daray ka dib qaabkeeda oo u eg jaakad. Bacda jaakada waa fududahay in la sameeyo waxayna leedahay adeegsiyo kala duwan. Waxay noqotay lama huraan lagama maarmaan u ah dadka nolol maalmeedka.
Mid ka mid ah Lakabka Semi-Automatic T-Shirt Mashiinka Samaynta
Heat Goynta Labada Lines Semi-Automatic T-Shirt Bag Samaynta Mashiinka
Xawaaraha Sare Mashiinka Bacda Samaynta Bacda Tooska ah ee otomaatiga ah
Bacda dharka (Xiisadda kuleylka iyo goynta qabow)
Bacda funaanadu waa mid ka mid ah bacaha caagga ah ee caadiga ah. Waxaa loogu magac daray ka dib qaabkeeda oo u eg jaakad. Waxay u noqotay lama huraan lama huraan u ah dadka nolol maalmeedka, iyada oo dadka siisa raaxeeyn weyn
2 Khadadka Isku-xidhka Kuleylka iyo Qaboojinta Qaboojiyaha Bag / Mashiinka Mashiinka Samaynta
GFQ-S kululeeyaha kulul Mashiinka Mashiinka Samaynta Mashiinka leh Conveyor
GFQ-C Heat shaabadaynta Mashiinka Samaynta Bacda T-Shirt Qabow
Bacda rogista qashinka
Isku rogidda bacaha qashinka, sida magaca ka muuqata, waa bacaha lagu hayo qashinka. Bacda qashinka lagu rogo waxay u qaybsan tahay laba naqshadood, mid hoose oo fidsan iyo mid kale oo salka ku haya octagonal. Bacda qashinka oo leh naqshad hoose oo fidsan, awood ballaaran. Awoodda dhalista dhibcaha badan ee siddeed geesoodka ah ayaa ka xoog badan.
bacda dharka, Boorsada boorsada, Bacda rootida
Boorsooyinka boosta ayaa loo tixraacayaa bacaha loo adeegsado warshadaha xawliga ah ee dukumiintiyada baakadaha, risiidhada, qalabka, iyo alaabada. Sidoo kale loo yaqaan boorsooyinka boostada, boorsooyinka wax lagu duubo ee degdegga ah, Boorsooyinka dharka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa funaanadaha, tolnimada, dharka, dharka iyo warshadaha kale. Badanaa waxaa loo isticmaali jiray in lagu raro dharka.
RQL Side Khatimidii Heat Mashiinka Mashiinka Samaynta Bacda
Bacda dhuumaha kareemka
Bacda dhuumaha waa nooc ka mid ah boorsooyinka ay isticmaalaan qolka keega si ay ugu sameeyaan ubaxyo lagu qurxiyo buskudka keega. Mashiinka xirashada dhinaceena sidoo kale wuxuu sameyn karaa bacda ubaxa. Mindiyaha ayaa si gaar ah loogu talagalay boorsooyinka qaababka gaarka ah leh sida bacaha ubaxa, bacaha xarkaha, baakadaha dalladda, iwm. Boorsooyinka waa hagaagsan yihiin oo qurux badan yihiin, oo leh geeso jaris adag oo siman.
OPP, CPP, PE Ubax Bag, Mashiinka Mashiinka Samaynta Bag
Galoofka PE, galoofyada CPE
Gacan-gashiyada PE ee la tuuro waa nooc ka mid ah galoofyada balaastigga ah. Aad ayey ugu habboon tahay in la isticmaalo, oo maxaa yeelay dusha sare ayaa lagu farsameeyaa dusha sinnaanta, waxay ka hortagi kartaa isku dhejinta waxaana lagu qasi karaa gacmaha bidix iyo midig. Waxay noqotay wax soo saar si weyn loo isticmaalo.
Mashiinka Samaynta Gacan-gashiga Semi-automatic Caaga ah
Mashiinka Mashiinka Sameynta Gacan-gashiga Caaga ah